Abusuafo a Wonnye Nni​—Wobɛyɛ Dɛn Aka Wɔn Koma? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“KƆ WO fie, w’abusuafo nkyɛn, na kɔka nea Yehowa ayɛ ama wo nyinaa ne mmɔborɔhunu a wayi adi akyerɛ wo no kyerɛ wɔn.” Yesu Kristo na ɔkaa saa asɛm no kyerɛɛ ɔbarima bi a na ɔpɛ sɛ obedi n’akyi. Saa bere no ebia na ɔwɔ Gadara. Ná saa beae no wɔ Galilea Po no anafo baabi. Yesu asɛm no ma yehu sɛ na onim su bi a ɛwɔ nnipa ho. Ɛne sɛ, sɛ nnipa te asɛmpa bi a, wɔpɛ sɛ wɔka kyerɛ wɔn abusuafo.—Mar. 5:19.
Ɛnnɛ nso saa na ɛte. Ɛwom, ɛsono ɔman biara ne sɛnea wɔda saa su yi adi, nanso sɛ obiara te asɛmpa a ɔpɛ sɛ n’abusuafo nso te. Enti sɛ obi bɛyɛ nokware Nyankopɔn no somfo a, ɛyɛ a na ne ho pere no sɛ ɔbɛka ne gyidi ho asɛm akyerɛ n’abusuafo. Nanso asɛm no ne sɛ, sɛn na ɛsɛ sɛ ɔyɛ no? Sɛ ɔwɔ abusuafo a wɔn som nko anaa wonni ɔsom biara mu a, ɔbɛyɛ dɛn aka asɛm no ma aka wɔn koma? Bible ma yehu ɔkwampa a yɛbɛfa so ayɛ saa.
“YƐAHU MESIA NO”
Yesu bere so no, sɛ yɛreka nnipa a wodii kan hui sɛ ɔno ne Mesia no a, Andrea ka ho. Bere a Andrea huu no no, hena na odii kan bɔɔ no amanneɛ? Bible ka sɛ: “Ohuu n’ankasa ne nua, Simon, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Yɛahu Mesia no’ (a ne nkyerɛase ne Kristo).” Afei Andrea de Petro kɔɔ Yesu nkyɛn. Ná eyi yɛ akwannya kɛse, efisɛ akyiri yi Petro bɛyɛɛ Yesu suani.—Yoh. 1:35-42.
Bɛyɛ mfe asia akyi no, na Petro wɔ Yopa. Ɔde n’ani kyerɛɛ Kaesarea kɔɔ ɔsraani panyin Kornelio fie. Henanom na ɔkɔtoo wɔn wɔ fie hɔ? Bere a Petro ne ne mfɛfo no duu hɔ no, na “Kornelio nso afrɛfrɛ n’abusuafo ne ne nnamfonom nyinaa retwɛn wɔn.” Enti Kornelio maa n’abusuafo nyaa kwan tiee Petro anom asɛm sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ankasa besi wɔn gyinae.—Aso. 10:22-33.
Sɛ yɛhwɛ sɛnea Andrea ne Kornelio ne wɔn abusuafo dii a, dɛn na yebetumi asua afi mu?
Andrea ne Kornelio ammu wɔn ani angu wɔn abusuafo so. Andrea ankasa na ɔde Petro kɔɔ Yesu nkyɛn, ɛnna Kornelio nso totoo nneɛma maa n’abusuafo tiee Petro anom asɛm. Nanso Andrea ne Kornelio anhyɛ wɔn abusuafo, na saa ara nso na wɔandɛfɛdɛfɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ Kristo akyidifo. Yebetumi ahwɛ nea wɔyɛe no asuasua. Yɛn ankasa betumi aka nokware no ho asɛm akyerɛ yɛn abusuafo anaa yebetumi ama wɔahyia yɛn mfɛfo gyidifo na wɔnam saayɛ so ate nokware no. Nanso ɛsɛ sɛ yegye tom sɛ wɔwɔ hokwan sɛ wɔpaw nea wɔpɛ; ɛnsɛ sɛ yɛde asɛm no puapua wɔn. Jürgen ne ne yere Petra fi Germany. Wɔwɔ suahu bi a ɛbɛma yɛahu sɛnea yɛbɛboa yɛn abusuafo. Momma yɛnhwɛ.
Petra ne Yehowa Adansefo suaa Bible, na edidi mu araa na ɔbɔɔ asu. Na ne kunu Jürgen yɛ sraani. Bere a Petra gyee nokware no, na ne kunu ani nnye ho. Nanso akyiri yi Jürgen hui sɛ nea Adansefo no rekyerɛkyerɛ no yɛ nokwasɛm a efi Bible mu. Eyi nti ɔno nso hyiraa ne ho so maa Yehowa, na yɛrekasa yi ɔyɛ asafo mu panyin. Jürgen wɔ afotusɛm bi a ɛbɛboa ma yɛahu sɛnea yɛbɛka asɛm no akyerɛ yɛn abusuafo a wonni nokware no mu.
Jürgen kae sɛ: “Ɛnsɛ sɛ yɛde Bible mu nsɛm puapua yɛn abusuafo anaa yɛde tuatua wɔn aso. Sɛ yɛde puapua wɔn a, wɔn kɔn rennɔ mpo na wɔatie. Ɛno ara ne sɛ ɛwom ara a na yɛapɔne nokware no ho kakra akyerɛ wɔn. Sɛ yetumi ka yɛn abusuafo kɔ asafo no mufo a wɔne wɔn bɔ tipɛn ho a, ɛno nso bɛboa paa. Sɛ nso yɛn abusuafo ani gye biribi ho na yehu sɛ asafo no mufo bi ani gye saa ade no ho a, yebetumi ayɛ ama wɔne wɔn ahyia. Yɛreyɛ saa nyinaa na yɛreka wɔn ba nokware no ho.”
“Ɛnsɛ sɛ yɛde Bible mu nsɛm puapua yɛn abusuafo anaa yɛde tuatua wɔn aso.”—Jürgen
Bere a ɔsomafo Petro ne Kornelio abusuafo tee Bible mu asɛm no, wosoo mu prɛko pɛ. Nanso saa bere no mpo ɛnyɛ obiara na ɔsoo asɛmpa no mu ntɛm saa.
YESU NUANOM NSO Ɛ?
Bere a Yesu reyɛ n’asɛnka adwuma no, n’abusuafo bi gyee no dii. Wo deɛ ma yɛnhwɛ ɔsomafo Yakobo ne Yohane. Ɛbɛyɛ sɛ na wɔn maame Salome nua ne Yesu maame. Enti yɛreka a na Yesu nua ne wɔn. Ebetumi aba sɛ na Salome ka ‘mmea foforo pii a na wɔde wɔn ahode resom Yesu ne asomafo no’ ho.—Luka 8:1-3.
Nanso Yesu abusuafo bi wɔ hɔ a egyee bere ansa na wɔregye no adi. Bere a Yesu bɔɔ asu akyi bɛyɛ afe biako no, na nnipadɔm bi ahyiam ofie bi mu retie no. Nanso “bere a n’abusuafo tee no, wɔkɔe sɛ wɔrekɔkyere no, efisɛ wɔkae sɛ: ‘N’adwene asɛe.’” Bere foforo nso Yesu nuanom bi kobisaa no n’akwantu ho asɛm nanso wanyi ano tee. Adɛn ntia? “Asɛm no ara ne sɛ, na ne nuanom nnye no nni.”—Mar. 3:21; Yoh. 7:5.
Sɛ yɛhwɛ Yesu ne n’abusuafo asɛm no a, dɛn na yebetumi asua afi mu? Ade biako ne sɛ bere a ne nuanom bi kae sɛ n’adwene asɛe no, ne bo amfuw wɔn. Yesu wu nyanee akyi mpo no, oyii ne ho adi kyerɛɛ ne nua Yakobo. Yebetumi aka sɛ eyi hyɛɛ Yakobo ne Yesu nuanom foforo nkuran na wohui sɛ ɔne Mesia no ampa. Enti bere a asomafo no ne afoforo wɔ Yerusalem abansoro dan bi mu no, na Yesu nuanom ka wɔn ho, enti wonyaa honhom kronkron no bi. Bere bi akyi no, Yakobo ne Yuda a ɔyɛ Yesu nua foforo nyaa hokwan nwonwaso pii.—Aso. 1:12-14; 2:1-4; 1 Kor. 15:7.
EBI DEƐ GYE BERE
“Nea ehia ara ne abotare, abotare, ne abotare. Woyɛ saa a, ebetumi asow aba pa.”—Roswitha
Ɛnnɛ nso yɛn abusuafo bi wɔ hɔ a egye bere ansa na wɔaso nokware no mu. Wo deɛ ma yɛmfa Roswitha asɛm no nyɛ nhwɛso. Bere a Roswitha kunu bɔɔ asu 1978 bɛyɛɛ Yehowa Dansefo no, ɔno deɛ na Roma Katolek asɔre adi ne ti. Ná Roswitha nni ne som ho agorɔ koraa, enti ahyɛase no ɔsɔre tiaa ne kunu. Nanso bere rekɔ so no, nneɛma sesae, na obehui sɛ Adansefo no na wɔrekyerɛkyerɛ nokware no. Enti afe 2003 mu no, ɔbɔɔ asu. Dɛn na ɛma ɔyɛɛ nsakrae a ɛte saa? Nea ɛte ne sɛ bere a Roswitha sɔre tiaa ne kunu no, ɔbarima no ne no ampere so. Mmom onyaa ne ho abotare sɛ ɔbɛsesa. Afotu bɛn na Roswitha de ma yɛn? Ɔka sɛ: “Nea ehia ara ne abotare, abotare, ne abotare. Woyɛ saa a, ebetumi asow aba pa.”
Yɛnhwɛ Monika nso. Ɔbɔɔ asu 1974, na mfe du akyi no, ne mmabarima baanu nso bɛyɛɛ Adansefo. Ɛwom, Monika kunu Hans ansɔre antia no de, nanso Hans antumi ammɔ asu kosii afe 2006. Sɛ abusua yi bu kɔmpɔ hwɛ wɔn akyi a, dɛn na wɔwɔ ka? Ɛno ara ne sɛ: “Kɔ so ara bata Yehowa ho, na mma biribiara nsɛe wo gyidi.” Ade biako a abusua no yɛe ne sɛ daa na wɔma Hans hu sɛ wɔdɔ no. Wɔamma wɔn abam ammu, mmom na wogye di sɛ daa-ankɔ-amma bi obegye nokware no.
MA NOKWARE NO NNWUDWO WƆN
Bere bi Yesu kae sɛ nokware no te sɛ nsu a ɛma daa nkwa. (Yoh. 4:13, 14) Enti yɛpɛ sɛ nokware no dwudwo yɛn abusuafo te sɛ nsu kurennyenn a emu adwo. Nanso yɛmpɛ sɛ yehwie nokware nsu no gu wɔn anom waa ma ɛtram wɔn. Sɛ ebedwudwo wɔn oo, sɛ ɛbɛtram wɔn oo, sɛnea yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn gyidi mu na ɛbɛkyerɛ. Bible ka sɛ: “Ɔtreneeni koma dwen ansa na ama mmuae.” Afei ɛka sɛ, “Onyansafo koma ma n’ano da nhumu adi, na ɛma n’anom kasa yɛ dɛ.” Yɛbɛyɛ dɛn de afotu yi ayɛ adwuma?—Mmeb. 15:28; 16:23.
Yɛmfa no sɛ ɔbea bi pɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ ne gyidi mu kyerɛ ne kunu. Sɛ odi kan dwinnwen asɛm no ho a, ɔbɛto ne bo akasa na n’ano ampa. Ɛnsɛ sɛ ɔma ne kunu nya adwene sɛ ɔrebu no atɛn. Sɛ ɔnwene ne nsɛm yiye a, ebetumi adwudwo ɔbarima no na ama asomdwoe aba fie. Ɔbea no betumi abisa ne ho sɛ, ‘Bere bɛn na me ne me kunu kasa a, ɔbɛyɛ aso atie me? Dɛn na ɔtaa ka ho asɛm anaa ɔkenkan? Dɛn na n’ani gye ho—nyansahu, amanyɔsɛm anaa bɔɔl?’ Dɛn na ɔbea no bɛyɛ de apusuw ɔbarima no ma n’ani abegye Bible ho na wahwɛ sɛ ɔne no nnye akyinnye na ɔnka biribi ntia no? Sɛ odwen eyinom nyinaa ho a, ɛbɛma ɔde nhumu akasa.
Sɛ yɛpɛ sɛ yɛka asɛm ma ɛka yɛn abusuafo a wɔnyɛ Adansefo koma a, ɛnyɛ nea ehia ara ne sɛ yɛbɛto yɛn bo ase akyerɛkyerɛ yɛn gyidi mu. Mmom ɛsɛ sɛ yɛde abrabɔ pa taa akyi.
BƆ BRA PA BERE NYINAA
Jürgen a yɛaka ne ho asɛm dedaw no kae sɛ: “Fa Bible nkyerɛkyerɛ bɔ wo bra da biara da. Ebia w’abusuafo mfa wɔn ti nnye nokware no de, nanso wobɔ bra pa bere nyinaa a, wobehu ma apusuw wɔn.” Hans yere bɔɔ asu no, edii bɛyɛ mfe 30 ansa na ɔno nso rebɔ asu. Hans kaa too Jürgen asɛm no so sɛ: “Ehia paa sɛ wobɔ wo bra sɛ Kristoni; ɛbɛma w’abusuafo ahu sɛ nokware no reboa wo wɔ w’asetenam.” Yɛn gyidi nti yɛda nsow wɔ afoforo ho. Nanso sɛ yɛn abusuafo hwɛ yɛn a, ɛsɛ sɛ wohu sɛ yɛwɔ suban pa, na ɛnyɛ sɛ yɛn gyidi asɛe yɛn.
“Ehia paa sɛ wobɔ wo bra sɛ Kristoni; ɛbɛma w’abusuafo ahu sɛ nokware no reboa wo wɔ w’asetenam.”—Hans
Ɔsomafo Petro de afotu maa mmea a wɔn kununom nni nokware no mu. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommrɛ mo ho ase mma mo ankasa mo kununom, na sɛ ebinom anyɛ aso amma asɛm no a, ɔyerenom nam wɔn abrabɔ so anya wɔn a ɔkasa nka ho, efisɛ wɔn ankasa bedi mo abrabɔ kronn ne obu a emu dɔ no ho adanse. Na mommma mo ahosiesie nnyɛ nnipa ani so de, mmɛsawɔw ne sikahyɛ anaa ntadehyɛ, na mmom momma ɛnyɛ komam nipa a wahintaw, honhom a ɛyɛ komm na edwo, atade a ɛmporɔw; eyi na ɛsom bo Onyankopɔn anim.”—1 Pet. 3:1-4.
Petro asɛm yi kyerɛ sɛ ɔbea bi abrabɔ pa betumi apusuw ne kunu ma wabegye nokware no. Bere a Christa bɔɔ asu 1972 no, ɔde sii n’ani so sɛ ɔde Bible mu asɛm no bɛyɛ adwuma. Enti efi saa bere no nyinaa wabɔ mmɔden sɛ ɔde n’abrabɔ pa bɛka ne kunu koma. Bere bi na ne kunu ne Adansefo no sua ade nanso wanso nokware no mu. Wakɔ asafo nhyiam pɛn na ɔne anuanom bɔ kama. Anuanom nso ma no nidi a ɛfata; wɔmfa ɔsom no nguan ne ho. Christa rebɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ biribi ma aka ne kunu koma. Dɛn na ɔyɛ?
Christa kae sɛ: “Masi me bo sɛ meremman mfi Yehowa kwan ho da. Mereyɛ saa nyinaa na merebɔ mmɔden sɛ mede m’abrabɔ benya me kunu a ‘ɔkasa nka ho.’ Nea ɔpɛ biara a meyɛ ma no, gye nea Bible mpene so. Migye tom sɛ ɔwɔ hokwan sɛ ɔyɛ nea ɔpɛ, enti magyaw biribiara ama Yehowa.”
Christa asɛm yi kyerɛ yɛn sɛ mfaso wɔ so paa sɛ yɛyɛ fakaa. Da biara ɔyɛ nneɛma a ɛbɛhyɛ ne gyidi den; ɔkɔ asafo nhyiam daa na ɔmfa n’asɛnka kɔ nso nni agorɔ. Nanso ommu n’ani ngu ne kunu so, onya ne ho adagyew, na ɔma ohu sɛ ɔdɔ no. Sɛ yɛne yɛn abusuafo a wonni nokware no mu redi a, ɛyɛ papa sɛ yɛyɛ fakaa na yɛte wɔn ase. Bible ka sɛ: “Biribiara wɔ ne bere a wɔahyɛ ato hɔ.” Eyi kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yeyi bere si hɔ ma yɛn abusuafo, ɛnkanka yɛn ahokafo a wonni nokware no mu no. Sɛ yenya wɔn ho bere a, ɛno nko ara mpo frɛfrɛ nkɔmmɔbɔ. Nokware a ɛwom ara ne sɛ, sɛ yegye bere ne wɔn bɔ nkɔmmɔ a, ɛremma wɔnte nka sɛ wɔayɛ ankonam na wɔatwe ninkunu.—Ɔsɛnk. 3:1.
Yɛnhwɛ Holger nso. Ɔne n’abusuafo a aka bɔɔ asu no, mfe 20 akyi ansa na wɔn papa rebɔ asu. Holger kae sɛ: “Sɛ yɛn busuani bi nni nokware no mu a, ehia paa sɛ yɛma ohu sɛ yɛdɔ no na yɛbɔ mpae ma no.” Christa nso kae sɛ ‘ɔrempa abaw da; ogye di paa sɛ daakye bi ne kunu begye nokware no na wabɛsom Yehowa.’ Sɛ yɛn abusuafo nni nokware no mu a, ɛnsɛ sɛ yɛpa abaw. Mmom ɛsɛ sɛ daa yenya anidaso sɛ wobetumi abɛka yɛn ho.
Nea ɛsɛ sɛ yɛde yɛ yɛn botae ni: Ɛsɛ sɛ yɛhwɛ na yɛne abusuafo no ntam ansɛe. Bio ɛsɛ sɛ yɛfa kwan bi so ma wohu nokware no ho biribi. Afei ehia sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛka Bible mu asɛm ma aka wɔn koma. Momma yɛnyɛ eyi nyinaa wɔ “odwo ne obu a emu dɔ mu.”—1 Pet. 3:15.